Moto G7 Power သည် FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို 5000 mAh ဖြင့်ရရှိသည် Androidsis
Moto G စီးရီးသည်အသင်းဝင်အသစ်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည် သတ္တမမျိုးဆက်မော်ဒယ်များအသစ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရမျှော်လင့်ထားသည့်အရသိရသည်။ ဂိမ်းအပြင် Moto G7, Moto Plus အား G7 နှင့် Moto G7 Play နှင့် Lenovo တံဆိပ်သည်စတုတ္ထပုံစံဖြစ်သော the Moto G7 ပါဝါ.
Moto G7 Power သည်ထိုင်းနှင့်အမေရိကန်တို့တွင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။ ထိုင်းအသိအမှတ်ပြုအေဂျင်စီကဖုန်းတွင် XT1955-4 နံပါတ်ပါရှိပြီး၎င်းကို Moto G7 Power ဟုလူသိများသည်။ FCC စာရွက်စာတမ်းများကိုပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
FCC သည်ယခင်မော်ဒယ်နံပါတ်အတူတူဗားရှင်းတစ်မျိုးသာမကအခြားသုံးခုကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ အခြားဖုန်း၏မူကွဲများတွင်သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်နံပါတ်များရှိသည်။ 'XT1955-1'၊ 'XT1955-2' နှင့် 'XT1955-7'.
Moto G7 | ရင်းမြစ်: SlashLeaks
မော်ဒယ်နံပါတ် XT1955-1 ပါ ၀ င်သောဗားရှင်းသည် Dual-SIM အထောက်အပံ့ရှိပြီးဘရာဇီးတွင်စတင်ဖြန့်ချိမည်။ 'XT1955-2' model သည် SIM နှင့် dual dual မျိုးကွဲများပါရှိပြီးကျန်လက်တင်အမေရိကတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် 'XT1955-4' နှင့် 'XT1955-7' နံပါတ်များပါသောမူကွဲများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူကွဲများ (ROW) ဖြစ်ပြီးတစ်ခုတည်းနှင့် dual-SIM ဗားရှင်းများဖြင့်ထွက်ပေါ်လာမည်။ ဒီစုံတွဲအကြားခြားနားချက်အဆုံးစွန်သောအတွက် NFC ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအေဂျင်စီကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ဖုန်းသည်အမြင့် ၁၅၉ မီလီမီတာနှင့်အကျယ် ၇၆ မီလီမီတာနှင့် ၁၆၇ မီလီမီတာအချင်းမျဉ်းရှိသည်။ ၁၅၆ မီလီမီတာနှင့်အကျယ် ၇၆mm အကျယ်ရှိသော Motorola One Power တွင် ၆.၂ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ အရွယ်အစားအတော်အတန်နီးကပ်နေသောကြောင့် Moto G156 Power သည်အတူတူ (သို့) အနည်းငယ်ပိုကြီးသည့်မျက်နှာပြင်ရှိနိုင်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများအရဖုန်းတွင်နောက်ကင်မရာတစ်ခုသာရှိမည်၊ အန်းဒရွိုက် 9.0 Pie ၎င်းတွင် ၅၀၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Turbo အားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Moto G7 Power သည် ၅၀၀၀ mAh ဘက္ထရီနှင့်ပိုမိုသည်
သင့်အိမ်ကိုယူရိုအနည်းငယ်သာဖြုန်းသော Smart Life ကိရိယာများဖြင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း